::Rojgar Manch||Online Newspaper :: Employment Nepal News, Financial Nepal News, Nepal Breaking News, Nepali Latest News, Top Headlines News, National, Political News, Social, Sports, Economy, Business, Health, Entertainment, Nepali Movie, Nepali Music Video and World News, Nepal Bank News, business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale, Nepal Weather सकसमा एनआरएनए अध्यक्ष भट्ट:: Rojgar Manch ::
सकसमा एनआरएनए अध्यक्ष भट्ट
न्याय माग्दै राना अदालतमा
मंगलवार, २०७४ माघ २२ गते ०४:४८
एनआरएनए नेतृत्वले आफ्नो कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई अन्याय गरी बरखास्त गरेपछि ब्यापक आलोचना मात्र खेप्नु परेको छैन, अदालत नै पुग्नु परेको छ । ‘श्रमिक मारा’ नीतिको शिकार बन्दै वर्षौ त्यही संस्थामा काम गरेका कार्यकारी निर्देशक राजेश रानालाई हटाएपछि न्याय खोज्दै उनी अदालतसम्म पुग्न बाध्य बनेका हुन् ।
विश्वमा रहेका श्रमिकहरुको साझा संस्थाका रुपमा चिनिएको एनआरएनले योसँगै आफ्नै संस्थामा श्रमिकको अधिकार खोसेपछि अहिले एनआरएन अदालतसम्म तानिएको हो ।
आफ्नै कर्मचारीबाट एनआरएन इतिहाँसमा नै पहिलो पल्ट अदालतमा पुग्नु पर्दा अध्यक्ष भवन भट्ट सकसमा परेका छन् । आफ्नो भन्दा पनि अरुको लहलहैमा हिड्ने भट्ट आफैले खनेको खाल्डोमा परिरहेका छन् ।
संस्थालाई आफ्नो स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गर्ने प्रयासस्वरुप लामो समयदेखि संघको सचिवालयमा कार्यकारी निर्देशक रहेका रानालाई बर्खास्त गरेर विधान विपरित प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदको सिर्जना गरेर हेमन्तकुमार दवाडीलाई नियुक्ति दिइएपछि अहिले राना न्यायका लागि श्रम अदालत पुगेका छन् । एनआरएनका कार्यकारी अधिकृत राजेश रानाले श्रम अदालतमा गत जनवरी १७ तारिख उजुरी दिएपछि अदालतले एनआरएनएलाई पत्र काटेको छ । जनवरी १९ मा अदालतले एनाअरएनलाई पत्र काट्दै राना हटाउनुको कारणसहित उपस्थित हुन बोलाएको छ ।
श्रम अदालतले यही माघ २५ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । अचानक, कुनै कारण बिना नै, विधानका ब्यवस्थालाई समेत लत्याउँदै लामो समय सेवा गरेको स्थायी कर्मचारीलाई हटाउन नमिल्ने भएकाले अदालत पुगेको रानाले रोजगार मञ्चसँग वताएका छन् ।
एनआरएनए सचिवालयमा कार्यरत अन्य कर्मचारीको पारिश्रमिक वढाउने तर रानालाई बर्खास्त गर्ने एनआरएनए नेतृत्व र विशेष गरी महासचिव डा. बद्री केसीको कदम हदैसम्म पूर्वाग्रही देखिन्छ ।
रानाले भने–‘मेरो एउटै माग पुर्नवाहाली हो ।’ एनआरएन नेतृत्वले आफ्नो स्थायी कर्मचारीलाई, श्रम ऐन २०७४ को ब्यवस्था विपरित कामबाट निकालिएको छ । जबकी ऐनमा ६ महिना काम गरेका ब्यक्ति स्वत स्थायी हुने प्रावधान छ ।
एनआरएनले भने सम्झौता अवघि सकिएको भन्दै रानालाई हटाइएको प्रचार गरेको छ तर राना निश्चित अवधिका लागि सम्झौतामा काम गरेका कर्मचारी नभई स्थायी कर्मचारी हुन् ।
महासचिव डा. बद्री केसीको लहडमा रानालाई हटाउने र दवाडीलाई ल्याउने काम गरेको एनआरएनए स्रोत वताउँछ । महासचिव बद्री केसीको रबैयाले एनआरएनएको भविष्यलाई लिएर समेत चिन्ता सुरु भएको छ । महासचिव केसी कार्यसमितिले निर्णय गरेर सम्मानजनकढंगबाट रानालाई विदाई गरेको बताउँछन् । यद्यपी उनले आफैले बनाएको कर्मचारी छनोट सम्वन्धी निर्देशिकाको समेत उलंघन गरेका छन् ।
एनआरएनको मुल नेतृत्व भनेकै अध्यक्ष र महासचिव हुन् । तर दुबैले विधि प्रक्रियाको धज्जी उडाउन थालेपछि एनआरएनएको भविष्यबारे प्रश्न गर्ने स्थिति बनेको छ ।
संस्थाकै दुरुपयोग गरेर बैंकबाट ऋण लिनु र सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक राजेश रानालाई बर्खास्त गर्नुले अध्यक्ष भवन भट्ट आलोचित त बनेका छन् नै सँगसँगै महासचिव केसीको गलत रबैयामा सहयोगीको भूमिकामा देखिएपछि उनीप्रति एनआरएनएका अधिकांश पदाधिकारी र सदस्यहरु असन्तुष्ट बनेका छन् ।